UBUMI BASEMTHETHWENI NGOTYALO-MALI eTurkey | IXESHA LE-100% LEMPUMELELO | ENGABEKI NXAXOLO | Ipasipoti yesibini yeTurkey, Ukufudukela kwezoqoqosho ngokutyala eTurkey, ubummi ngotyalo-mali eTurkey, ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali eTurkey, ubummi ngotyalo-mali
Ubumi ngoTyalo-mali lwaseTurkey kunye neVisa yeGolide
Sinikezela ngeeNkonzo zoFuduko lwezoQoqosho eTurkey:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eTurkey
● Ubumi ngotyalo-mali oluvela eTurkey
● IVisa yegolide eTurkey
● Ipasipoti yesibini evela eTurkey
● Ubummi ngotyalo-mali lwaseTurkey ngokutyala izindlu nomhlaba
Best Abameli bobumi ngoTyalo mali eTurkey Kunye namagqwetha ee Ubummi ngoTyalo-mali eTurkey kunye nabarhwebi bepropathi yokuthengisa izindlu nomhlaba eTurkey basebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ubumi ngabameli botyalo mali baseTurkey babonelela ngeenkonzo zokuhlala eTurkey, Ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali eTurkey, Ubummi ngenkqubo yotyalo-mali eTurkey, Ubumi bobuTyalo ngokuTyala eTurkey, Ubumi bobabini ngotyalo-mali eTurkey, ubumi kunye nokuhlala kutyalo-mali eTurkey. , Ubumi ngokusisigxina ngotyalo-mali eTurkey, Ubumi bexeshana ngotyalo-mali eTurkey, Ubummi ngesikimu sotyalo-mali eTurkey, Ubummi ngezikim zotyalo-mali eTurkey, Ukuhlala ngotyalo-mali eTurkey, Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali eTurkey, Ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eTurkey, okwesibini Ukuhlala kwakhona ngotyalo-mali eTurkey, ukuhlala kwakhona ngobutyalo-mali eTurkey, ukuhlala kunye nobumi ngokutyala eTurkey, ukuhlala kunye nobumi ngokutyala eTurkey, iinkqubo zokuhlala kwezoqoqosho eTurkey, Ukuhlala kwakhona ngesikimu sotyalo-mali eTurkey, Ukuhlala kwakhona ngezikim zotyalo-mali eTurkey, okwesibini ipasipoti eTurkey, iinkqubo zokundwendwela yesibini eTurk ey, inkqubo yesibini yokundwendwela eTurkey, ipasipoti yesibini yesibini eTurkey, ukuhlala kunye nepasipoti yesibini eTurkey, ipaspoti yesibini yozakuzo eTurkey, ipasipoti yesibini ngokutyala imali eTurkey, ipasipoti yesibini yokuba ngummi eTurkey, iskim sepasipoti yesibini eTurkey, izikimu zepasipoti zesibini I-Turkey, i-visa yegolide eTurkey, ii-visa zegolide eTurkey, iinkqubo ze-visa zegolide eTurkey, inkqubo yegolide yegolide eTurkey, yesibini visa igolide eTurkey, inkqubo yesibini yegosa yegolide eTurkey, visa yegolide ezimbini eTurkey, ubumi kunye nevisa yegolide eTurkey, Ukuhlala kunye nevisa yegolide eTurkey, ubummi begolide begolide eTurkey, isikimu sevisa segolide eTurkey, izikimu zevisa zegolide eTurkey.
"Izisombululo ezi-1 zokumisa" kubo bonke ubumi bakho ngotyalo-mali eTurkey ngenkxaso eyongezelelweyo.
Utyalo-mali oluncinci eTurkey kubumi ngotyalo-mali: USD 250,000 (izindlu nomhlaba)
Intshayelelo iTurkey kunye noBumi ngoTyalo mali
Funda nzulu ngeTurkey
Ukukhwela ilizwekazi laseYurophu nelaseAsia, indawo ebaluleke ngabom eTurkey iyinike igalelo elibonakalayo kwisithili- kunye negunya lokudlulela kuLwandle Olumnyama.
Inkqubela phambili kwinkqubo esekwe kuvoti kunye noqoqosho lwentengiso lwaluyeka emva kokubhubha kuka-Ataturk ngo-1938, kwaye umkhosi-uzijonga njengombhali-siseko womgaqo-siseko-waphindaphinda wagxotha oorhulumente ababonwa bezama ukubabaza okuqhelekileyo.
Ukujoyina i-European Union ibe ngumnqweno omde. Iintetho zobhaliso zathunyelwa ngo-2005 ukanti ziye zacothisa ngenxa yokwenyani malunga nerekhodi yenkululeko yaseTurkey.
Iingcebiso eziLungileyo zokuPhila eTurkey
1: Ulawulo oluLungileyo lweMali
Kwimeko yokuba nantoni na inokuphazamisa ubomi bakho obutsha eTurkey, imali engenakunceda abaphathi baya kuyenza. Ukusukela ekuqaleni, yazi iveki yakho ngeveki, inyanga nenyanga, kunye namatyala oyinyanga, kunye nesicwangciso senkcitho kwixabiso eliphakathi lezinto ezisisiseko. Kwimeko apho ingeniso yakho iyimali engaqhelekanga njengemali eyongezelelekileyo esebenza kumhlaba wokuzalwa okoko isikali sokutshintsha esingazinzanga silapha naphaya njengeYo-Yo. Yiba nengqiqo.
Isicwangciso sokuchitha isibini esihlala kwipropathi yabo eDidim asizukuhlala kumqeshi eIstanbul, esona sixeko sibiza kakhulu eTurkey. Inxalenye enkulu yemali ziindleko eziphezulu zokufumana imali kwiakhawunti yotyalo-mali. Ngokwesiqhelo i-10%, le yindlela engaqhelekanga yokwakha ii-asethi zakho ezinkulu ngaphandle kokuzisebenzisa kunye noluhlu lweentsuku ezingama-31 ukuya kunyaka.
2: Ukungenisa ngaphakathi ifenitshala kunye nempahla yekhaya
Wonke umntu simqonda ukuba ngubani othumele yonke ifanitshala yosapho ithi yayikukuzilolonga okungenamsebenzi, ikheshi kwaye kubangele uxinzelelo olungenantsingiselo. Isakhelo sokungenisa kunye nesakhelo serhafu kunzima ukusiqonda phantsi kwezona meko zilungileyo kwaye sihlehlisa rhoqo ukuphuhliswa kweemveliso ezinkulu. Iindleko azibekeli bucala imali, kwaye kuya kufuneka uthenge ifenitshala entsha apha.
Ngelixa izinto ezimhlophe zibiza imali eninzi, imithombo emininzi ihlala iqhubela phambili ngamalungiselelo okhetho kwaye xa kuthengwa ngobuninzi kunika uphawu. Olunye ukhetho ukuba uthenga ipropathi eTurkey kukubona izindlu ezithengiswayo kwiziseko ezisisiseko okanye ezinxibe ngokupheleleyo.
3: Fumana i-Inshurensi yezeMpilo
Nawuphi na umntu waseTurkey ongaphantsi kweminyaka engama-65 kwaye ohlala kwilayisensi yokuhlala makabe nonyango Nokuba kunjalo, ayinyanzelekanga ngaphezulu kwe-65s. Oku kulungile xa unemfumba yemali ebhankini, nangona kunjalo ngethuba lokuba, iindleko zenyanga nenyanga azifanelekanga, ngaphandle kwayo nayiphi na ingxaki yokuziva uzolile, ngesizathu sokuba isitroke, isiqendu se-coronary episode okanye umsebenzi obalulekileyo unokubaleka kwiiponti ezininzi. Abantu abambalwa bathatha isigqibo malunga nokhuseleko lwabucala ngelixa abanye behlawula kwisakhelo segunya le-SGK.
Kudala umzuzwana ubuyile, uninzi lwangaphandle lusebenze gwenxa. Ezo ntsuku azisekho. Ewe, nkqu nakumaholide ehlobo, kunzima ukufumana umgca omtsha womsebenzi ngaphandle kokuba ufumane eyona mvume ilungileyo. Ngaphandle kokuba ulungelelanisa umsebenzi kunye nombutho wehlabathi okanye usebenza kwimidiya, kunzima ukulandelela ishishini elisemthethweni.
Abantu abambalwa bathatha isigqibo sokukhuthaza isiNgesi nangona kunjalo ukuba benze njalo, bafuna itestamente ye-TEFL. Abanye basebenzela imibutho yamanye amaxesha ecaleni kweAegean neMeditera, ukanti ubukhulu becala, lo ngumsebenzi wamaxesha athile. Ukuthetha ngokubanzi, sukuhamba kwaye unethemba lokujonga ngokukhawuleza uhlobo oluthile lomsebenzi. Kwimeko apho kuya kufuneka usebenze, layisha phambi kokuba uphume kwaye uqinisekise izivumelwano kunye nelayisensi yokusebenza emiselweyo.
5: Lindela umothuko wenkcubeko
Ukuba seholideyini kubhabha umphezulu kwaye kukude kwindlela ubomi bemihla ngemihla obufana ngayo. Ukusuka eKurban Bayram minyaka le ebandakanya ukohlwaywa kwebhokhwe okanye igusha ngokubhekisele kukhetho lweqabane lakho laseTurkey ukukhawulezisa iintsuku ezingama-30, indlela yobomi iyakhanya xa uhlala apha. Ukusuka emitshatweni apho iindwendwe zisebenza khona i-coke kunye namandongomane, kodwa wonke umntu uhamba ubusuku bonke kummelwane osondeleyo owenza i-DIY ngo-10: XNUMX ukuphosa kwingxolo yolawulo, kunye neBos Ver (ungazikhathazi), kwaye ngaphandle kokuba uyatshintsha Kakade kwaye bayayamkela imeko yento eyiyo, inkcubeko iyabonisa intloko yayo eyoyikisayo.
I-6: Musa ukulinganisa
Ngokwenkcubeko, ukutya, imbali, ibhola ekhatywayo, imiba yezomthetho, imozulu, kunye nobomi bemihla ngemihla, iTurkey yahluke kakhulu kwaye kunzima ukuyenza phantsi kwesambrela esinye. Kwi-Aegean retreat ye-Didim, iimpembelelo zase-Bhritane zigcwele, umbulelo kwinethiwekhi enkulu ye-pat, nangona kunjalo e-Antalya, abantu baseRussia yeyona ndibano ingaqhelekanga.
Ngokufanayo, ukumodareyitha uKonya, kwisithili esigxile kwiAnatolian akufani kwaphela neIstanbul. Nokuba yeyiphi na, i-Izmir, isixeko sesithathu ngobukhulu eTurkey sifumene ukungaziphathi kakuhle kwilizwe lonke kwaye sikhokelela kwindlela yoyilo kunye neepateni. Nokuba kunjalo, iindidi ezimangalisayo luphuhliso olumangalisayo ngokukhanya kwinto yokuba ukuphanda amabala kunye nokufumanisa malunga nokutya kunye nembali kumnandi kakhulu.
Qhubeka uqhubeke, kuluhlu lwethu lweengcebiso zokuhlala eTurkey kukuzonwabisa, uphumle, kwaye uzinike ithuba lokukhululeka. Isizwe sinento eninzi yokuzisa etafileni kuye nawuphina umntu othatha njengekhaya lakhe ekhaya. Kwimeko apho ungakhange ukhethe ukuba ushiye phi, eli nqaku lixoxa ngezichaso zangaphambili ze-pat ezinikezela ngeengcebiso kunye nezikhokelo. Ukongeza, sitsalele umnxeba kwithuba lokuba uzimisele ukuthenga ipropathi yaseTurkey kwaye unokufuna ukufumanisa malunga nokubeka izibonelelo kurhwebo lomhlaba.
Iinkcukacha ezisisiseko sokuba ngabemi boTyalo mali baseTurkey
Ubuncinci botyalomali Ubumi ngokutyala imali eTurkey
USD 250,000 (izindlu nomhlaba)
Ubumi ngokutyala imali eTurkey
Mfutshane okanye ixesha elide Imvume yokuhlala / iVisa yokuhlala
Iqhubekeka nexesha lokuba ngummi ngotyalo-mali lwaseTurkey
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi baseTurkey
Iinketho zotyalo mali ze Ubumi ngokutyala imali eTurkey
> Izindlu nomhlaba
> Venture capital capital: Thenga i-500,000 yexabiso lesabelo seVC
Kutheni usiya kubumi ngotyalo-mali lwaseTurkey
Nge-Septemba ka-2018 iTurkey yabhengeza ngokusesikweni ubumi ngenkqubo yotyalo-mali yokukhuthaza abantu bamanye amazwe ukuba batyale imali kwilizwe kunye nokonyusa uphuhliso kwicandelo lokuthengiswa kwezindlu.
URhulumente welizwe upapashe imigaqo yobumi eyalungisayo eyanciphisa imali yotyalo-mali ukunyusa utyalomali lwangaphandle ngqo kwi-gazette esemthethweni yomhla we-18 Septemba 2018. Abaphambukeli, abathenga izindlu nomhlaba okanye batyale imali kwezi zinto zilandelayo, njengoko kuchaziwe kwezi zilungiso zintsha, unelungelo lokuba ngummi waseTurkey ngotyalo-mali.
Ubumi Ngenkqubo yotyalo mali eTurkey
> Izindlu nomhlaba: Thenga izindlu nomhlaba ubuncinci ubuncinci i-250,000 yeedola engathengiswanga iminyaka emi-3
Idiphozithi yeBhanki: Idiphozithi okungenani eyi- $ 500,000 kwiibhanki zaseTurkey
> Iibhondi zikaRhulumente okanye ukhuseleko: Thenga iibhondi zikarhulumente waseTurkey ezingama-500,000 ezivaliweyo iminyaka emi-3
> Ukudalwa kwemisebenzi: Sebenzisa abantu abangama-50 ubuncinci
Inkxaso yabathengi kubumi ngokutyala imali eTurkey
Iqela lethu Ubumi Ngabameli botyalo mali baseTurkey kwaye Ubumi ngoTyalo-mali Amagqwetha yeTurkey ibonelela abathengi kunye neentsapho zabo eTurkey ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali oluvela eTurkey, ukuhlala ngokutyala imali evela eTurkey kunye namanye amathuba otyalo mali, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu azikhawulelwanga ekuhlaleni ngenxa yotyalo-mali oluvela eTurkey okanye kwiVisa yaseGolide evela eTurkey okanye ubumi ngotyalo-mali oluvela eTurkey okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda nakwezona mali zilungileyo zokufumana izindlu eTurkey, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani I-Turkey okanye i-offshore, izibonelelo zabantu eTurkey kunye nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwemali kunye nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi eTurkey nakwindawo yokuhlala yesibini.
Inkxaso ekhethekileyo kubemi baseTurkey:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ubummi ngeenkonzo zotyalo mali yeTurkey, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena eTurkey, abarhwebi abafudukela kwamanye amazwe abafikelelekayo eTurkey, Ubumi obufikelelekayo ngabacebisi botyalo-mali baseTurkey, Ubumi obufikelelekayo ngamagqwetha otyalo-mali eTurkey kunye nefemi yokubonelela ngokufudukela eTurkey.
Ubumi ngokutyala imali ukusuka eTurkey ukuya kumazwe angama-37.
Visa yegolide eTurkey kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka eTurkey ukuya kumazwe angama-37.
Ukufudukela kwamashishini ngokusekwe eTurkey ukuya kumazwe angama-106.
Ubumi ngeenkqubo zotyalo-mali ezivela eTurkey.
Iinkqubo zevisa ezimnandi eTurkey ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi beenkqubo zotyalo-mali ukusuka eTurkey ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini ukusuka eTurkey ukuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka eTurkey ukuya kumazwe angama-106.
Ubummi ngoTyalo-mali lwaseTurkey ngokuThengisa izindlu
Sinikezela ngenkxaso kutyalomali lokuthengiswa kwezindlu kunye nomhlaba eTurkey ngombono wokuba umthengi kufuneka afumane imbuyekezo entle kutyalo-mali lwaseTurkey, nanini na, xa efuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo lokuba ngabemi babo ngokutyala imali eTurkey. Sidibene nabaphuhlisi abambalwa bezindlu eTurkey abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezilungileyo eTurkey, belanda eyona mbuyekezo.
Eyona nkqubo yokuhlala kwabemi baseTurkey ngotyalo mali kwizindlu nomhlaba eTurkey.
Kufuneka wazi-Ubumi baseTurkey ngotyalo-mali
Ubummi ngeGqwetha loTyalo-mali laseTurkey liza kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu ngokunikezela ngobumi bakho obuyimpumelelo ngokutyala imali eTurkey. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zoBumi boTyalo-mali eTurkey zibandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka eTurkey okanye eTurkey, ngokusekwe kwiziphakamiso ezinokuthi zenziwe
Siqala ngenkuthalo ngenxa yokukhuthazeka, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ukuba ngabemi ngokutyala imali eTurkey kubaxhasi ukuze bafumane ubumi baseTurkey kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo efanelekileyo yeTurkey, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubeke nobumi bakho ngokufaka isicelo sotyalo-mali eTurkey kuya kufuneka ukuba sikhuphele iikopi zabathengi kunye namalungu epasipoti.
Ukuguqulelwa kunye ne-apostille yamaxwebhu Ubumi ngesicelo sotyalo-mali seTurkey. Amagqwetha ethu akhethekileyo oBumi ngokutyala imali eTurkey kunye nevisa yegolide iya kunceda ekugcwaliseni iifom kunye namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu obuzwe bakho kunye nawosapho lwakho afake isicelo sokutyala eTurkey, siya kuyizalisa ngabasemagunyeni baseTurkey.
Nje ukuba isicelo sakho sobumi ngokutyala eTurkey samkelwe, sabelana ngeendaba ezimnandi nawe kwaye siqala ukulungiselela ezinye izixhasi.
Asibuxhasi okanye sibunike ubumi ngeenkonzo zotyalo-mali eTurkey kubantu abakhankanywe ngezantsi okanye amashishini eTurkey:
Ubumi ngeenkonzo zotyalo-mali eTurkey azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi beengalo kunye neembumbulu ezisuka okanye eziya eTurkey.
Ubumi ngokweenkqubo zotyalo-mali lwaseTurkey azinikezelwa kuhlolo lobuchwephesha eTurkey okanye ubuntlola bezorhwebo kwiinkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye ukusuka okanye ukuya eTurkey.
Ubumi ngokubonisana notyalo mali eTurkey azinikezelwa ngayo nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho eTurkey.
Ubumi ngenkxaso yotyalo mali yeTurkey ayisiyonto yabantu abajongana nemathiriyeli yemfuza eTurkey.
Ubumi ngeenkonzo zotyalo-mali eTurkey ayisiyo yamashishini ajongene nezixhobo eziyingozi okanye ezinobungozi zebhayoloji okanye zenyukliya eTurkey.
Ubumi ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yeTurkey ayifumaneki kubantu baseTurkey abasebenza kurhwebo, ukugcinwa eTurkey, okanye ukuhanjiswa kwamalungu oLuntu.
Ubumi ngotyalo-mali yeTurkey ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Ubumi iinkonzo zenkqubo yeTurkey ayizizo ezenkolo kunye noncedo lwabo eTurkey.
Ubumi ngeenkonzo zotyalo-mali kwi ikarikuni ayibonelelwa ngabantu abajongana nemifanekiso engamanyala eTurkey.
Ubumi bethu abameli eTurkey abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi eTurkey.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo okulumkisa ukuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubathengi baseTurkey kunye ne-KYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva malunga nokwaliwa kwabasemagunyeni eTurkey malunga nokuvunywa kwesicelo Ubumi ngotyalo-mali eTurkey.
Ubumi ngotyalo-mali eTurkey nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sinikezela ngobumi obuBalaseleyo ngenkxaso yotyalo-mali eTurkey kutyalo-mali, ukufudukela kwelinye ilizwe kunye nokucwangciswa kwezindlu kunye nomhlaba eTurkey.
Ixhaswa bubumi bamazwe aphesheya ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho waseTurkey, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Ubummi bethu ngeenkonzo zotyalo-mali eTurkey zibonelela ngexabiso elinexabiso eliphantsi, ngezinga elifanelekileyo lempumelelo eTurkey.
Sithathe iminyaka yamava kubumi bobabini eTurkey ukuxhasa abathengi kunye neentsapho zabo eTurkey.
Ubumi obunamava ngabaceli botyalo-mali baseTurkey kunye nabameli bezomthetho eTurkey ababonelela ngenkxaso kubaxumi.
Sinezona solicitors zintle kunye neearhente zenkqubo yokuphatha iTurkey kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Phambi kobummi bakho baseTurkey nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu eTurkey
Sinamava aphesheya kubuMmi ngotyalo-mali kubandakanya iTurkey, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko apho, ubumi bakho ngotyalo-mali eTurkey buyasilela, kukho amanye amazwe angama-36 esiwasebenzisayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zobumi ngokuTyala imali eTurkey
Ukubala iindleko zobumi ngokutyala iTurkey nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi baseTurkey, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zobumi ngenkqubo yotyalo mali yeTurkey kunye nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa yeTurkey
Inkqubo yemvume yokusebenza eTurkey
Ukuhlala okwethutyana eTurkey
Indawo yokuhlala isigxina eTurkey
Izindlu zoonozakuzaku kunye nabathunywa baseTurkey
Ubumi ngoTyalo mali eTurkey nakwezinye iiNkonzo
Sibonise ezinye iinkonzo ezimbalwa esizibonelelayo eTurkey ngeemfuno zangoko okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukufudukela nosapho lwakho eTurkey ngokutyala, thina njengeqabane lakho eTurkey, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo eTurkey ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kobumi ngokubonisana notyalo-mali eTurkey, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo ze-HR naseTurkey, ongazukuyifumana phantsi kwesambrela esinye esibonelelwe ngabaphi na abanye abacebisi baseTurkey abasenza ivenkile yokumisa enye eTurkey nakwamanye amazwe angama-106.
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nehlabathi jikelele kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye neshishini eTurkey ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yabathengi bethu engaphaya kobumi ngokutyala imali eTurkey ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nokudibana eTurkey nakwamanye amazwe.
Inkampani e Turkey
Singakunceda bhalisa inkampani eTurkey okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani eTurkey zitshiphu kunye nathi.)
Iakhawunti yeBhanki eTurkey
Nawuphi na umtyalomali ofudukela eTurkey uya kuyidinga iakhawunti yebhanki yakho eTurkey kunye neakhawunti yebhanki yenkampani eTurkey, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Intlawulo yesango eTurkey
Ngaba ufuna ukubonisana eTurkey, kuba izisombululo zentlawulo yedijithali eTurkey Njengendlela yokuhlawula yesiko okanye yefintech eTurkey okanye kwizisombululo ze-crypto, masixelele.
Emva kokuba ngummi ngotyalo-mali ukuze ETurkey ukuba uceba ukwenza njalo qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho eTurkey ukuqala kwangoko eTurkey.
Iinkonzo zabasebenzi eTurkey
yethu Inkampani yabasebenzi eTurkey inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona izithuba ezikhoyo eTurkey free.
Iinombolo zeFowuni eyiNene eTurkey
Iinkqubo zeefowuni zeshishini eTurkey kunye amanani abonakalayo eTurkey Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali eTurkey
Accounting, ngenxa yenkuthalo efanelekileyo eTurkey nase okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo eTurkey
Ukuseta ishishini eTurkey
Emva kokuba ngummi ngotyalo-mali ukuya eTurkey, ukuseta ishishini kwi ikarikuni.
Sinikezela ngezisombululo ezisezantsi ze-IT eTurkey
Uyilo lwewebhu eTurkey
Uphuhliso lwezorhwebo eTurkey
Uphuhliso lwewebhu eTurkey
Uphuhliso lweBlockchain eTurkey
Uphuhliso losetyenziso eTurkey
Uphuhliso lweSoftware eTurkey
Amagqwetha oBumi ngoTyalo mali eTurkey
Sinikezela ubumi obusemthethweni ngezisombululo zotyalo-mali eTurkey kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, eTurkey, siziinkokheli, ifemu yethu yezomthetho eTurkey ineearhente zokufudukela eTurkey, sinedumela lokuhambisa awona mava asemagqabini okwenza iinkonzo eTurkey nge Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu baseTurkey kunye neentsapho zabo. Ubumi bethu liqela lotyalo-mali eTurkey libonelela ngezisombululo eziyilwe ngempumelelo yabathengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana imvume yokuhlala eTurkey, xa imvume yakho yokuhlala eTurkey ivunyiwe.
Amandla egqwetha laseTurkey ayafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngoBumi bobuGqwetha ngotyalo-mali eTurkey. Ukuba useTurkey okanye uceba ukutyelela iTurkey, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani eTurkey ukude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuba asetyenziswe kummandla waseTurkey. Kuxhomekeka kwilizwe ohlala kulo, kuya kufuneka ukuba ukhutshiwe okanye ubhaliswe ngokusemthethweni ngummeli waseTurkey.
Imibuzo ebuzwa rhoqo- Ubumi ngoTyalo mali eTurkey
Ithini inkcazo yokuhlala ngokutyala imali eTurkey?
Ukuhlala kwakhona ngotyalo-mali eTurkey, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala eTurkey ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseTurkey ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, neshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njlnjl. Faka isicelo sokuhlala ngokutyala imali eTurkey, ukuhlala kwenkqubo yotyalo-mali yeTurkey. ixhaswe kukuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali eTurkey, ngokuhlala kwethu okugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eTurkey, indawo yokuhlala eyiyo ngamagqwetha otyalo-mali eTurkey kunye nokuhlala okungcono ngabacebisi botyalo-mali baseTurkey, abasebenza kwindawo yokuhlala efanelekileyo ngabameli botyalo-mali eTurkey, kunye neefem eTurkey.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali eTurkey | Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo-mali eTurkey | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eTurkey | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo-mali eTurkey | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo mali baseTurkey
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngotyalo-mali eTurkey?
Ubummi ngotyalo-mali eTurkey, bunokuchazwa njengokufumana ubumi baseTurkey ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseTurkey ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl.njl. Faka isicelo sokuba ngummi ngotyalo-mali eTurkey, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali yaseTurkey exhaswa bubummi ngeenkonzo zotyalo-mali eTurkey, ngobumi bethu obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eTurkey, abemi abangcono kakhulu ngamagqwetha otyalo-mali eTurkey kunye nobumi obungcono ngabacebisi botyalo-mali baseTurkey, abasebenza kubumi obugqwesileyo ngabameli botyalo-mali eTurkey, kunye neefemu zokubonisana nabantu abafudukela eTurkey.
Iinkonzo zongeniso lwabatyali mali ezifikelelekayo eTurkey | Amaxabiso afikelelekayo okufudukela eTurkey | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha eTurkey | Abatyali mali abafikelelekayo eTurkey | Abatyali mali abangenakufikeleleka eTurkey | Iifemu zomthetho wofuduko ezingenaxabiso eTurkey
Ithini inkcazo yepaspoti yesibini eTurkey?
Ipasipoti yesibini eTurkey, inokuchazwa njengokufumana ubumi obusemthethweni baseTurkey ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseTurkey ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Iinkonzo zokundwendwela zesibini eTurkey, ngamagqwetha ethu esibini eepasipoti eTurkey, awona magqwetha esibini eepasipoti eTurkey kunye nabacebisi besibini abaphuma phambili eTurkey, abasebenza kwiiarhente zokundwendwela zesibini eTurkey, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eTurkey.
Iinkonzo zokundwendwela yesibini iTurkey | Iiarhente zokundwendwela zesibini eTurkey | Amagqwetha esibini epasipoti eTurkey | Igqwetha lesibini lokundwendwela eTurkey | Abacebisi bokundwendwela besibini eTurkey
Iyintoni inkcazo yevisa yegolide eTurkey?
I-visa yegolide eTurkey, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala eTurkey ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseTurkey ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, izindlu nomhlaba, njl. Faka isicelo sevisa yegolide eTurkey, inkqubo yegosa yegolide yeTurkey exhaswa yi Iinkonzo zeVisa zegolide zaseTurkey, ngamagqwetha ethu egolide aseTurkey, amagqwetha egosa asezona zilungileyo eTurkey kunye nabacebisi abagqwesileyo begosa baseTurkey, abasebenza kwiiarhente zevisa zegolide eTurkey, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eTurkey.
Iinkonzo zevisa ezimnandi zeTurkey | Iiarhente zevisa ezimnandi eTurkey | Amagqwetha egosa egolide eTurkey | Amagqwetha egosa egolide eTurkey | Abacebisi begosa begolide baseTurkey
Leliphi elona xesha lincinci lotyalo mali lokuba ngummi ngotyalo-mali eTurkey?
Ubuncinci botyalo-mali kubumi ngotyalo-mali eTurkey yi-USD 250,000 (izindlu nomhlaba).
Ngaba ubonelela ngenkxaso yezomthetho eTurkey kubumi ngotyalo-mali?
Ewe, igqwetha lethu eTurkey kunye neearhente zaseTurkey zibonelela ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali eTurkey.
Ngaba ubummi ngotyalo mali lwaseTurkey lubiza kakhulu?
Iindleko zoBumi boTyalo-mali eTurkey kunye noBumi ngeemfuno zengxowa-mali yokutshala imali eTurkey yeyabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo wobonelelo kubuZaleli ngotyalo-mali ukuya eTurkey, sikwabonelela ngezinye iinkxaso ezininzi kubuZwelonke ngezisombululo zotyalo mali.
Leliphi ilizwe labahlali abanokufaka isicelo sobumi ngokutyala imali eTurkey okanye nge-visa yomtyali mali ukuya eTurkey?
Ubummi beenkonzo zotyalo-mali ezinokuthi zisetyenziswe ngabemi beliphi ilizwe kodwa imizekelo embalwa bubuLuntu ngokutyala imali ukuya eTurkey ukusuka e-Asiya, ukuba ngummi ngotyalo-mali ukuya eTurkey ukusuka e-Afrika, ukuba ngummi ngotyalo-mali ukuya eTurkey ukusuka eYurophu, ukuba ngummi ngotyalo-mali ukuya eTurkey ukusuka eMzantsi Melika, Ubummi ngotyalo-mali eTurkey usuka eMalaysia, Ubummi ngotyalo-mali eTurkey usuka e-Bangladesh, Ubumi ngotyalo-mali eTurkey usuka e-Indonesia, Ubummi ngotyalo-mali eTurkey usuka eSri Lanka, Ubummi ngotyalo-mali eTurkey usuka eNepal, Ubummi ngotyalo-mali ukuya eTurkey usuka eIndiya naseBummi ngotyalo-mali oluya eTurkey lusuka e-UAE.
Ubumi bobuGcisa ngesiKhokelo kuTyalo mali yeTurkey
Cela ukubonisana simahla kubumi bakho ngoTyalo-mali eTurkey
Amagama abalulekileyo kubumi ngoTyalo mali lwaseTurkey
Incwadana yomthetho waseburhulumenteni
Iwebhusayithi esemthethweni yoKhenketho lwaseSwitzerland
Inkundla yaseburhulumenteni yaseSwitzerland
Ukufuduswa kwe-Ankara AG
Hlanganisa kwi ISebe loFuduko lwaseTurkey , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko eTurkey